Safiirka Soomaaliya ee Uganda oo la kulmay Gudoomiyaha Baarlamaanka Uganda | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Kampala-(sonna)-Safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda Danjire Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayaa kulan la qaatay Gudoomiyaha Baarlamaanka Uganda Mudane Jacob L. Oulanyah, iyagoo ka wada hadlay xariirka labada dal gaar ahaan labada Baarlamaan iyo sidii iskaashi loo sameyn lahaa labada dhinac.
Gudoomiyaha Baarlamaanka dalka Uganda ayaa xafiiska ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya, isagoo sheegay in xariir wanaagsan oo labada dal u dhaxeeyo uu jiro gaar ahaan labada baarlamaan oo dowladda Uganda marar badan tababaro u sameysay baarlamaanada maamul goboleedyada dalkeena Soomaaliya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Jacob L. Oulanyah, ayaa sheegay in Soomaaliya uu tagay sanadkii 2007-dii markaas uu Soomaaliya ka soo bixiyay tababar ku saabsanayaa dowladda wanaagga.
Safiir Cali Maxamed Maxamuud (Cali Cagabaruur ), ayaa dhankiisa ka warbixiyay xaaladda dalka iyo horumarka uu ku talaabsaday muddooyinkii ugu dambeeyay iyo doorashooyinka ka socda dalkeena Soomaaliya.
Safiir Cagabaruur ayaa ugu gudoomiyaha baarlamaanka Uganda ugu hambelyeeyay guusha uu ka gaaray doorashii dib loogu soo doortay, isagoo Danjiruhu ku martiqaaday gudoomiyaha in uu booqdo dalkeena Soomaaliya si uu u soo arko horumarka dalkeena, dhankiisa Gudoomiyahana uu aqbalay in Soomaaliya booqdo.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha Baarlamaamka ayaa guddoonsiiyay safiirka Soomaaliya ee Uganda hadiyado sharafeed, isagoo kulanka ku soo idlaaday is afgarad.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleed Koonfur galbeed Soomaaliya
Next articleJadwalka doorashada xubnaha Aqalka Sare ee Somaliland oo la shaaciyey